I-Laurel wreath tattoo enembali eninzi | Ukuzoba
I-Laurel wreath tattoo enembali eninzi
Nat Cerezo | | Iitattoos zeentyatyambo kunye nezityalo
Uphawu olunuka kamnandi lokuphumelela kangangamakhulu eminyaka, kwinqaku lanamhlanje siza kuthetha ngesithsaba se laurel tattoo ngentsingiselo enkulu. Kodwa kuqala siza kuqala ngembali encinci.
1 Izithsaba zikaLaurel kunye neGrisi
2 Iimpawu zikaLaurel wreath, kuphela zoloyiso
Izithsaba zikaLaurel kunye neGrisi
Kwakuyimini efudumeleyo yasehlotyeni eGrisi xa kwenzeka komnye umntu ukuba Isithsaba esenziwe nge-laurel sasiza kunikwa iimbongi, amagcisa kunye namagorha. Ikwanxulunyaniswa noloyiso kunye nolawulo, kungoko kuphela okungcono kokufumana lo mnikelo kunye nemvelaphi yesichazi iphumelele.
Kwelinye icala, ikwayayanyaniswa noApollo, uthixo welanga. Ukusuka kwinto ebonwayo, u-Eros, okwabizwa ngokuba ngu-Cupid, uthixo onomtsalane ngokwesondo, onwabile yindlela u-Apollo awayenekratshi ngayo, wagqiba kwelokuba aziphindezele ngokudubula utolo lwegolide ukumenza athandane nymph Daphne. Nangona kunjalo, wadutyulwa ngotolo olukhokelayo, olubangela isiphumo esichaseneyo. Ke u-Apollo, ethandana noDaphne, waqala wamleqa, wabaleka wabaleka de wacela uncedo kuthixo wakhe, uthixo womlambo uLadon, owamguqula waba ngumthi we-laurel. Njengoko uDaphne ebengasayi kuba ngumfazi wakhe, wagqiba ekubeni i-laurel ibe ngumthi wakhe awuthandayo kwaye iya kuba sisithsaba seentloko zabaphumeleleyo.
Iimpawu zikaLaurel wreath, kuphela zoloyiso
Ngoku ukuba uyazi ngakumbi malunga nentsingiselo kunye nembali yolu phawu, makhe sithethe nge-laurel wreath tattoo apho sifumene yonke into ukusuka kwi-laurel wreaths yedwa ukuya kwi-laurel wreaths esonga into efana nengqondo (sicinga ukuba ukubonisa amandla enzonzobila cinga: P), intyatyambo, isixhobo ... O nkqu nomfanekiso womntu onxibe isithsaba okanye okakayi ehonjiswe ngesithsaba.
Ukuza kuthi ga ngoku inqaku lethu namhlanje kwi-laurel wreath tattoo, siyathemba ukuba ulufumene ulwazi esikunike lona kwi-laurel wreaths enomdla. Kuwo nawuphi na umbuzo okanye into ofuna ukwabelana ngayo, unokukhetha ukusishiya nezimvo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Iitattoos zeentyatyambo kunye nezityalo » I-Laurel wreath tattoo enembali eninzi
I-Chihuahua tattoo, inja encinci ene-genie enkulu
IYorkshire, eyona tattoo inqwenelekayo yenja